အချိန်ရှိတုန်း လိုးပါရစေ – Grab Love Story
ကျတော် တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်မှာ ဆော်ရနေပီ မသူတဲ့ ။မသူကေတာ့ ဆယ်တန်းမအောင်ဘူး။ ဆိုင်တစ်ဆိုင် မှာညဝန်ထမ်းဝင်လူပ်နေတာပေါ့ ။ မသူက ကျတော့်ကိုအရမ်းချစ်တာ ကျောင်းဖွင့်ပီဆိုတာနဲ့ အဝတ်အစား အသုံးအဆောင်ကအစ ဝယ်ဝယ်ပေးလိုက်တာ။ ဒုတိယနှစ်ရောက်တော့ ကျတော် တခြားကောင်မလေးကို စိတ်ကစားမိတယ်။ မသူဘယ္လိုသိသြားလဲမသိဘူး။ ကျတော်နေတဲ့ မြို့ပေါ်အဆောင်ကို ဒေါသတကြီးနဲ့လိုက်လာတာပေါ့။
“ကိုမျိုး ရွိလား အကို”
မသူလည်း အခန်းတခါးဆွဲဖွင့်လိုက်တယ်။ ပြန်ပိတ်ပီး ဂလန့်ထိုးလိုက်တယ်။
“ဟဲ့ ကိုမျိုး ထပါဦး”
“အမ် ဘာဖြစ်လို့လဲ မ”
“နင်ကောင်မတစ်ယောက်နဲ့ ရှုပ်နေတယ်လို့ ငါကြားတယ်”
“ဟာ မ ကလဲ”
မသူက ဒေါသကြီးတယ်။ ကျတော့်ရင်ဘတ်ကိုတွန်းပီး လက်မောင်းတွေကို တဖျန်းဖျန်းရိုက်တယ်။
“နင့်ပေါ် ငါမကောင်းခဲ့လို့လား နင့်ပေါ်ငါသစ္စာဖောက်ခဲ့လား ဟီးးးး”
“ဟာ မ ရယ်… မငိုပါနဲ့ဗျာ”
ကျတော်လည်းဖက်ပီး ကုတင်ပေါ် ဆွဲထိုင်လိုက်တယ်။ဒါမယ့် အဆင်ပြေအောင်တော့ လုပ်မှ အဆောင်ထဲ ကြမ်းနေရင်အရှက်ကွဲမှာ။ ကျတော်လည်း တော်ကီတွေအမျိုးမျိုး လွှတ်ရတာပေါ့။ နဲနဲတော့ဒေါသပြေ သွားပုံရတယ်။ မတွေ့ရတာ ကြာတာရယ်.. သူကျေနပ်စေချင်တာရယ်နဲ့ ကုတင်ပေါ်ဆွဲလှဲရင်း ဖက်နမ်းပေးလိုက်တယ်။
“တကယ် မ ရဲ့… မ ကို အရမ်းချစ်တာ သိလား”
“မ ယုံအောင် သက်သေပြမယ်”
“ပေါက်ကရ မလုပ်နဲ့နော် မယူခင်ဘာမှမလုပ်ရဘူး”
“မလုပ်ပါဘူး မ ရဲ့…အရင်လိုလက်လေးနဲ့ သာယာအောင်ပဲလုပ်မှာ”
“ဒီခါကျတော့် မကိုဘယ်လောက်ချစ်ကြောင်းပါ သက်သေပြမှာ”
သူ့ဖက်မျက်နှာချင်းဆိုင် စောင်းလိုက်ပီး သူ့ခေါင်းလေးပွတ်သပ်ရင်းနှုတ်ခမ်းကို ဖွဖွလေးငုံစုပ်ပေးလိုက်တယ်။ စုပ်ရင်း သူ့ကျောပြင်လေးကိုဖက်ပီးပွတ် ပေးလိုက်တော့ သူလည်းဖီးတက်ပီးကျတော့်နှုတ်ခမ်းကိုတပြွတ်ပြွတ်နဲ့ ပြန်စုပ်တယ်။ ကျတော့်လက်တွေ သူ့ကျောပြင်ကနေ တဖြေးဖြေးလျောဆင်းပီး ကားစွင့်နေတဲ့ ဖင်ကြီးတွေကို ညှစ်ညှစ်ပီး နယ်ပေးလိုက်တယ်။ သူလည်းတွန့်သွားပီး ကျတော့်ကိုတင်းနေအောင်ပြန်ဖက်ထားတယ်။
ကျတော် သူ့နှုတ်ခမ်းပေါ်က ကျတော့်နှုတ်ခမ်းကိုခွာပီး ကိုယ္လုံးကိုအောက်နဲနဲလျောလိုက်တယ်။ သူ့အက်ျီလေးကိုအပေါ်ဆွဲလှန်ပီး စူမို့နေတဲ့ သူ့နို့ကြီးတွေကို လျှာလေးနဲ့ထိုးကလိလိုက်.. ငုံစုပ်လိုက်လုပ်ပေးလိုက်နဲ့ဖင်ကြီးတွေကိုတော့ အဆက်မပြတ်နယ်နေတာပေါ့။
နို့စို့လို့ အားရ္မသူ့ပေါင်တံတွေပေါ် လက်တင်လိုက်ပြီး ပေါင်တံလေးတွေကို ပွတ်ပေးလိုက်တာနဲ့ သူကလည်းအလိုက်တသိ ကားပေးတယ်။ နှုတ်ခမ်းတွေပြန်စုပ်ပီး ပေါင်းကြားထဲကစောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်း
နှုတ်ခမ်းတွေစုပ်လိုက် နို့ကိုတလှည့်ပြန်စို့လိုက်လူပ်ပီး သူ့စောက်စိလေးကို လက်ညိုးလေးနဲ့ဖွဖွလေး ဘယ်ညာပွတ်ပေးလိုက်တာနဲ့ပဲ…
“မ ဒူးထောင်ပီး ပေါင်ကားလိုက်”
“ဟင် မောင်.. မ လက်မခံဘူးနော်”
“အင်းပါ… မ ကို ဘယ်လောက်ချစ်ကြောင်းပြမှာ စပရိုက် မ်က္စိပါမွိတ္ထား”
မသူလည်း ကျတော့ပြောသလို ကားပေးပီး မျက်စိလေးပါမှိတ်လိုက်တဲ့အခါ ကျတော်လည်း သူ့ပေါင်ကြားထဲခေါင်းငုံ့ပီး ဖောင်းနေတဲ့စောက်ဖုတ်လေးကို အောက်ကနေအပေါ် ပိက်ခနဲယက်တင်လိုက်တယ်။
“အမေလး မောင်… ဟာ ဘာတေလုပ်နေတာလဲ”
သူလည်းခေါင်းထောင်အကြည့် ကျတော်သူ့ပေါင်တွေကိုင်လိုက်ပီး စောက်စိလေးကိုငုံစုပ်ပစ်တယ်။
မသူခမ်ာ တွန့်လိမ်ပီး မချိမဆန့်ခံစားလိုက်ရသလို ကျတော့ဆံပင်တွေအတင်းဆွဲစုပ်ထားတယ်။ ကျတော်လည်း ငုံထားတဲ့စောက်စိလေးကို ငုံရင်းနဲ့ပဲလျှာလေးနဲ့ကစားလိုက်တယ်။
နှစ်မိနစ်လောက်စောက်စိလေးကို စုပ်ပီးကလိပေးလိုက်တယ်။ပီးတာနဲ့စောက်ပက်အကွဲကြောင်းလေးကို လျှာနဲ့ထိုးဖြဲပီး ဘယ်ညာကစားလိုက်တယ်။ စောက်ပက်ကွဲကြောင်းကြားထဲ ကျတော့်လျှာထိပ်လေးမြှပ်ပီး အောက်ကနေအပေါ် ဆယ်ကြောင်းလောက်ဆွဲပွတ်ပေးလိုက်တယ်။
ပြီးတာနဲ့စောက်ပက်ကွဲကြောင်းလေးကို ဖြေးဖြေးလေးလက်နဲ့ဆဲဖဲပီး စောက်စိလေးကိုလှာထိပ်လေးနဲ့ထိုးထိုးချေလိုက် အပေါ်အောက် ဘယ်ညာကလိလိုက် သွက်သွက်လေးယက်ပေးနေလိုက်တာ..
မသူခမျာကော့တက်ပီး ကျတော့်မျက်နှာကို သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးနဲ့ဆွဲဆွဲကပ်တော့တာပဲ။ ကျတော်လီးကလည်း တော်တော်တောင်နေပီ၊ အကြောတွေပြိုင်းပြိုင်းထပီး ဒစ်ကြီးကိုကားတက်နေတာပဲ။
သူလက်မခံပေမယ့် အခြေနေက သူဈာန်အရမ်းဝင်နေပီ ။အမြန်ပဲခေါင်းကိုခွာလိုက်ပီး သူ့ပေါင်ကြားဒူးထောက် စောက်ရည်ချွဲနေတဲ့သူ့စောက်ဖုတ်ဝမှာ လီးအမြန်တေ့ပီး သူ့ပေါ်မှောက်ရင်း ဖြေးဖြေးချင်းဖိသွင်းလိုက်တာ…
သူလည်းအရမ်းကောင်းနေတော့ ကျတော့်ကိုတင်းနေအောင်ပြန်ဖက်ပီးလက်မောင်းတွေကိုကုတ်ထားတယ် ။ကျတော်လည်း လီးတဆုံးထဲ့ပီးတာနဲ့ သူ့ကျောအောက်ကိုအပိုင်သိုင်းဖက်ပီး အပေါ်ကနေ ဆောင့်ဆောင့်လိုးတော့တာပဲ…။
“ကောင်းလားမ မောင်လိုးတာ ”
သူပြန်မဖြေဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူအရမ်း ကောင်းနေမှန်းသ်ိတော့ ကျတော်မူလိုက်တယ် ။လီးကိုပြန်ဆွဲထုတ်ပီး..
“မ မကြိုက်ရင် မောင်မလုပ်တော့ပါဘူးကွာ”
“ပြော မောင်ဆက်လိုး ရမလား မလိုးရဘူးလား”
“မောင်ရယ် မ ကို ဆက္လိုးပါ…”
“အားးးကြိုက်ပီ မ ရယ်”
ကျတော်လည်းဖီးတွေတက်ပီး စောက်ဖုတ်ကြီးထဲလီးပြန်သွင်းပီး ဆောင့်တော့တာပဲ..။
“မ နောက်ခါ လိုးခွင့်ထပ်ပေးမှာလား အင့် အင့်”
“တကယ္လား မ အင့် အင့် အင့်”
“မ မောင့်လီးကိုကြိုက်သွား ပီလား”
“အင့် အင့် အားးးကောင်းလိုက်တဲ့စောက်ဖုတ်”
“အားးးမောင် ဆောင့် ဆောင့် မ တအားကောင်းလာပီ”
“ကျတော်လိုချင်တာ တောင်းဖို့ ခနရပ်လိုက်တယ်”
“မ မောင့်လီးကိုစုပ်ပေးမှာလား ”
“အ အ သောက်ပါမယ် ရှီးးးးမောင် ရယ် အားးးးအားးးးမ မ ပီးးးးးပီးးအ အားးးး”
ပြောမပြတက်အောက်ကော့လန်ပီး မသူပီးသွားတယ်။ကျတော်လည်း လေးငါးချက်ဆောင့်အပီး ….
“အားးးမရယ် မောင်ပီးတော့မယ် မ ပါးစပ်ဟထား”
လီးကိုစောင်ဖုတ်ထဲက အျမန္ထုတ္ပီး သူ့မျက်နှာပေါ်အရောက် သူလည်းခေါင်းထောင်ပီး လှမ်းငုံးလိုက်တယ် ။ကျတော်လည်း သူ့ခေါင်းဆွဲကိုင်ပီး သုံးလေးချက်ပါးစပ်ထဲဆောင့်လိုးလိုက်ပြီး..
“အားးးရှီးးးးမ ရယ်… အ့ အ့ အားးး…”
အု အု အွတ် ပြွတ် ပြွတ်….
သူ့ပါးစပ်ထဲလရည်တွေ ဒလဟောပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ တအုအုနဲ့ မသူခမ်ာ တခါမှလီးမစုပ်ဖူးတော့ ပြို့ထွက်သွားတယ်။ ပါးစပ်ထဲက လရည်တွေစီးကျပီးးးး နို့ကြားတွေအထိပါ အောက်ထိ စီးကုန်တယ်…မသူလည်း ရှက်ပြုံးလေးနဲ့”မောင် အရမ်းဆိုးတာပဲကွာ”…
ဒီအပြုံးနဲ့ ဒီအသံဟာ နောက်ထပ်အလိုးခံဘို့ အသင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတာ ကျွန်တော် သိလိုက်ရပါပြီလေ…။